Yakatangwa July, 2009.SWELL ndeimwe kupfuura maindasitiri customization uye chinouraya zvinogadzirwa mhinduro Kupa kambani mu China.Currently zvimba ane R & D chikwata vanhu vanopfuura makumi maviri, Sales mazano zvinopfuura gumi uye pamusoro zana namakumi manomwe kugadzirwa mushandi.
Zvimba chaitwa kuna inogona kuenderera kukura maindasitiri chinouraya michina, pamwe nenyanzvi ruzivo mashoko uye kutaurirana, zvimba inopa vatengi pamwe yepamusoro maindasitiri parunhare uye mahwendefa ane ruzivo dzinosanganisira NFC, RFID 125k / 13.56M / 915M / 2.4G, 1d / 2D Barcode, michini Ray, fingapurindi kukudzwa, ID kadhi kukudzwa, walkie talkie etc.
Zvimba inopa yemakwikwi maindasitiri dzorunhare, hwendefa mhinduro uye mabasa kuti vatengi kubvira maindasitiri akasiyana kuvabatsira kuwana mberi mune digitaalinen muvanhu, parizvino kuzvimba zvakabatsira anopfuura 35 maindasitiri customized zvigadzirwa izvo chaizvo kushandiswa mune logistics, zvokufambisa, kuchengeteka, kuwana masimba, cashless muripo, mashoko kubatwa, basa romumunda, dzidzo, zvokurapa, mauto, mari, maindasitiri kuzvidzora uye dzimwe chokuita maindasitiri. Zvino unozvimba dzerunhare & Tablet, IT zvokushandisa, mhinduro uye vakangwara chinouraya raiswa munyika dzinopfuura 40 uye kumatunhu pasi pose.
Kana kupa mhinduro kune imwe indasitiri, zvimba inopa toughest, akasimba Hardware kuti yenyu mhinduro yakakwana. Kana uchida kugadzira yenyu muenzaniso kuenzana kuti aenderane yenyu maindasitiri, zvimba inopa vakatendeseka pfungwa, ruzivo uye basa.
Zvitupa: All kuzvimba kuenzana zvigadzirwa vanopupurirwa pamwe CE / FCC / ROHS / IP advertising.